शिक्षकलाई अपमान गर्ने अधिकार युट्युबरले कहाँबाट कसरी पाए ? « Bagmati Online
कतिजनाको आमालाई किचेनको स्पेलिङ थाहा छ ? कतिका आमालाई स्ट्रगलको स्पेलिङ थाहा छ ? र, कतिको बुवालाई लाइफको स्पेलिङ लेख्‍न आउँछ ? नआए पनि कसरी उहाँहरूले जीवन र संघर्ष सिकाउन सक्नुभएको होला ? हो अहिलेका धेरै विद्यावारिधि गरेकाहरूलाई स्पेलिङ नआउने गुरुबा आमाले नै पढाएका हुन् । उहाँहरूले विज्ञान राम्ररी पढाउनुहुन्छ, लेख्‍नुहुन्छ तर साइन्सको स्पेलिङ आउँदैन । उहाँहरूले भूगोल पढाउनु हुन्छ । तर जिओग्राफी जान्‍नुहुन्‍न । गणित पढाउनु लेखाउनु हुन्छ तर म्याथम्याटिक्स जान्‍नुहुन्‍न ।
अंग्रेजी भाषा नजान्‍ने, क्यामेराअगाडि बोल्न डर मान्‍ने र सोझा सिधा शिक्षक अझै पनि धेरै छन् । जोसँग पढेर धेरैजना महान् डाक्टर, इन्जिनियर, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनिसके । तर उहाँहरूको स्थिति त्यही पुराना काठका डेस्क बेन्चसँग खेल्दैमा बितेको छ । के अंग्रेजीमा केही लेख्‍न नआउदै बेइज्जतको भागेदार बन्‍नुपर्ने ? हुन त टिचर खोजेकाहरूलाई गुरुबा गुरुआमाको महत्व र सम्मानबारे के थाहा ? हाम्रा लागि क्लासमा फरर अंग्रेजीमा लेक्चर दिएर जाने टिचरभन्दा जीवन सिकाउने अंग्रेजी नजान्‍ने कुना कन्दरामा बसेका गुरुबा गुरुआमा ठीक हुन् ।
यसको अर्थ शिक्षकहरू त्यही अवस्थामा रहने भन्‍ने होइन । त्यसको विषयमा छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ । तर, गुरुबा गुरुआमाहरूको यस प्रकारको बेइज्जत गर्ने युट्युब स्टन्ट घातक हो । पाका उमेरका शिक्षक शिक्षिकाहरूले त्यो बेला कसरी आफूले शिक्षा हासिल गर्नुभयो र शिक्षा क्षेत्रमा उहाँहरूको के–कस्तो योगदान र संघर्ष छ भन्‍ने पनि खोजी गर्ने हो कि ? अथवा पार्टीका भक्ते शिक्षकहरूको केही कथा निकाल्ने हो कि ? शिक्षक शिक्षिकाको त्यो अवस्था कसको कारणले आएको भन्‍ने जवाफ सबैसँग छ । बोल्न सक्दैनन् त्यति हो । शिक्षामा जुवा खेल्नेहरूको कथा छ कि बजारमा ?
यसको मतलब शिक्षक जस्तो छ, त्यस्तै ठीक छ भन्‍न खोजेको होइन । विषयगत शिक्षकले आफ्नो विषयमा जान्‍नुपर्छ । त्यो नजान्‍नु अपराध हो । अबको समयअनुसार शिक्षक ढल्किनुपर्छ । अपडेटेड हुनुपर्छ । किनभने, उनीहरूले २०-२५ वर्षपछिको जेनेरेसनलाई तयार गरिरहेका छन् । अबको समय प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै छ । हामीले ग्लोबल सिटिजन तयार पार्नुपर्ने भएको छ । यसर्थ पनि शिक्षक आजको दिनमा अपडेटेड हुनुपर्दछ । तर, यसको मतलब स्पेलिङ नजानेकै आधारमा शिक्षकलाई मूल्याङ्कन गर्न भने मिल्दैन ।